Kolo anaka: fahiratan-tsaina – fieritreretana – fietsehampo | NewsMada
Kolo anaka: fahiratan-tsaina – fieritreretana – fietsehampo
Par Taratra sur 12/06/2019
4- Moa ve ny hakingan-tsaina miankina amin’ny ambaratongam-pianarana efa nolalovana ?
Ny fahaizana maminavina ny oran-ko avy na ny havandra hilatsaka dia mitakyfahatsilovan-tsaina izay tsy voatery hananan’ny olona be diploma. Izany dia karazam-pahalalàna azo avy amin’ny fahaiza-manao sy traikefa ary ny fananana saina mahay mandinika ny zava-boary sy ny natiora.
Ny mpanao baolina kitra mahay indrindra sy ny mpanao baolina « basket » malaza eran-tany dia manana fahaizana manokana eo amin’ny fakana toerana eo ambony kianja. Sady mailaka no haingana sy mahomby rehefa milalao, mbola mahay mamitaka sy mitifitra baolina ka mahita harato avy hatrany. Vitsy anefa ireo nahavita fianarana hatramin’ny farany na manana diplaoma ambony amin’izy ireny.
Ireo mpanao hosodoko sy mpanao sary sikotra fanta-daza koa dia toa manana talenta nolovaina hatrany am-bohoka. Ireo olo-mahay voalaza eo ambony ireo no antsoina hoe « génies » eo amin’ny sehatra misy azy avy. Fantatra koa anefa fa niasa fatratra ireo olona ireo vao tojo amin’ny toerana misy azy.
5- Eto ianao dia miresaka momba ny olona faran’izay lalin-tsaina, fa ahoana kosa ny momba ny olon-tsotra na ny sarambabem-bahoaka ?
Ny olona toa anao sy izaho dia tsy voatery manana talenta manokana, nefa nyfotoam-pahazazana raha toa ka miaina ao anatin’ny tontolo mandrisika ny fivelarana ara-tsaina sy ny fitomboana ara-batana, dia fanoitra lehibe ahafahan’ny tsirairay mahazo hakingan-tsaina raha oharina amin’ny ankamaroan’ny olona.
6- Inona no mampiavaka ireo olona manana fahaizana voajanahary avo lenta (surdoué) eo amin’ny lafiny zava-kanto (art) na fanatajahantena sy ireo manana fahaizana amin’ny lafiny fianarana?
Ny ankabeazan’ny olona mahay dia olona « hypersensibles » na olona manana fisainana haingam-piasa, mora mahazo an-tsaina sy mahataka-javatra haingana ary afaka mamoaka fonjan-kevitra efa voadinika. Afaka mandre zavatra tsy henon’ny sasany izy ireo. Midika izany fa na ny taovam-pandrenesana, fahitana, fahatsapàna, fahenona fofona na tsiro, eny na ny fahatsapana amin’ny hoditra aza , dia mandaitra kokoa raha mihoatra amin’ny sarambabem-bahoaka.
Io « hypersensibilité » io no mampitombo ny fahaizany mandray zavatra sy mandinika ary manapa-kevitra haingana ka manjary olona filamatra izy ireo eo amin’ny sehatra misy azy avy raha ny fomba fihetsika sy fisainana no resahina. Ny fiantraikan’izany eo amin’ny fihetseham-po anefa dia mahatonga azy ireo ho olona mora tohina sy mora andairan-javatra.
Nyfitambaran’ireo toetra ara-tsaina ireo dia tombony lehibe tokoa ho an’ny olona « hypersensibles » nefa koa mety hitarika fahasarotana ara-pifandraisana sy eo amin’ny fizarana ao anatin’ny fiaraha-monina. Noho izany dia mitaky fanampiana sy fitsinjovana manokana avy amin’ny olona akaiky azy, izy ireo.